ကူညီနိုင်တဲ့အချက် ၁၀ ချက် - Brain On Porn
ငါ့ကိုကူညီ 10 အကြံပေးချက်များ
NoFap နှင့်ငါ့ကိုကူညီ 10 အကြံပေးချက်များ
by throughmyiphone9 ရက်ပတ်လုံး
* 1) သန့်ရှင်းသန့်ရှင်းသန့်ရှင်း !! ငါသန့်ရှင်းတဲ့ထဲမှာဖြစ်ကြောင်းကိုအခန်းထဲမှာ / ကားတစ်စီး / သမျှအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် Keeping ငါ့ကိုထွန်းလင်းထင်ကူညီပေးသည်။ ကြင်နာ၏နေရာတိုင်းန်းကျင်ချပစ်ပစ္စည်းပစ္စယများတစည်းထားရှိခြင်းသည်ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးတယောက်ကိုတယောက်အရာကနေသွားပါက, သင်သိကြရှေ့မှာကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံး Fapping အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ် .. ပြီးတော့အဲဒါကိုရှင်းလင်း, စင်ကြယ်သောနှင့်၎င်း၏မစင်ကြယ်လျှင်သင့်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယ Keep! 🙂
* 2) သင်နေ့အဘို့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုထွက်စာရင်းပြုစုပါ။ သင်ကချရေးလျှင်တစ်ခုခုဖြည့်စွက်ဖို့ပိုများပါတယ်။ စာရင်းတစ်ခု Creating သင်တစ်နေ့တာတစ်လျှောက်လုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်သောအရာကိုအာရုံစိုက်နှင့် Fapping ၏ချွတ်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက် ..
ညစ်ညမ်းသော blocker ကိုရယူပါ။ K3 သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအမှန်တကယ်ပြန်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားစေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအများစုသည်ရုတ်တရက်တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါလုပ်ရန်စဉ်းစားသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။
ဒါဟာတကယ်ကိုဝေးသင်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ကြသည့်အခါကွန်ပျူတာကနေဆက်နေရန်ကူညီပေးသည်တစ်ဦးတည်းအနေဖြင့် * 4) ဝေးကွန်ပျူတာကနေနေပါ။ သင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဖြစ်ရှိပါကအများပြည်သူရာဌာန၌အပေါ်ရရန်ကြိုးစားပါ။
* 5) အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာတစ်ခုခုနှင့်သင်၏ရမ္မက်အစားထိုးပါ။ အခါတိုင်း, သင်သည် fapping တူခံစားတစ်မိုင်ပြေးဒါမှမဟုတ်အားကစားရုံ, ဒါမှမဟုတ်အလေ့အကျင့်စန္ဒရားကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဟာအပြုသဘောတစ်ခုခုသို့သင့်ရဲ့အနှုတ်လက္ခဏာတတ်ပြီးပြန်သွားလေ၏။
* 6) လူမှုရေး, ထွက် Go လူသစ်ဖြည့်ဆည်းတဲ့အားကစားများအတွက် sign up ကို, သို့မဟုတ်သင်အမြဲလုပ်ဖို့ဘယ်လောက်သိလိုတစ်ခုခုသင်ယူဖို့သင်ခန်းစာအဘို့အ sign up ကို Get ။ (ကခုန်, drum, Insight web studio ၏။ )
* 7) သင်၏ NoFap ရည်မှန်းချက်ကိုသေးငယ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး ထပ်မံ၍ လုပ်ပါ။ noFap ဖြင့်ရက်ပေါင်း ၉၀ သွားရန်ခက်ခဲသောပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။ ငါလုပ်တာကငယ်ငယ်လေးကစပြီးထပ်ခါထပ်ခါလုပ်နေတာပဲ။ “ နှစ်ရက်အတွက် noFap ကကျွန်မရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါ” လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေမနပ်ပြောပြီးငါဝင်တိုက်လိုက်တာနဲ့“ ကောင်းပြီ၊ ငါ ၄ ရက်သွားနိုင်မလားကြည့်ရအောင်” ငါပြန်ပြောဖို့လိုပြီလို့ခံစားမိရင်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြောလိမ့်မယ်။ အိုကေ၊ ကျွန်မရဲ့ရည်မှန်းချက်ကနောက်ထပ် ၄ နာရီခန့်ကြာအောင်လုပ်ဖို့ပါ။ ငါအားကစားခန်းမကိုသွားမယ်၊ ငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးရင်ငါနောက်ထပ် ၁ နာရီပဲကြာအောင်ကြိုးစားမယ်”
* 8)“ တစ်ကြိမ်တည်း” ဟူ၍ မရှိပါ။ သင်သည် NoFap မြည်းတစ်ဝက်မဟုတ်ပါ။ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါ) သင့်ကိုယ်ပိုင် fap ကိုစဉ်းစားပါက“ အိုကေ၊ ဒီတစ်ကြိမ်သာလုပ်လိုက်ရင်ငါလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ရပ်တန့်ပစ်လိုက်ပါ။ “ ကောင်းပြီ…ငါဒီနေ့လုပ်ခဲ့တယ်၊ နောက်တစ်ခါထပ်မနာစရာဖြစ်မယ်” ဒါမှမဟုတ်“ ကောင်းပြီ၊ မနက်ဖြန်နောက်တစ်ခါပြန်စမယ်” ရုံမလုပ်ပါနဲ့။
* 9) NoFap လူတို့သည်ငါ့သွားစောင့်ရှောက်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုပေးသည်အကျိုးဘယ်လောက်မြင်လျှင်အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုဖတ်ပါ။
* 10) Bordem ငါနှင့်အတူအ relapse များအတွက်ကြီးမားသောအကြောင်းမရှိ () အလုပ်ရှုပ်နေပါဖြစ်ပါတယ်အလုပ်များနေပါ။ နေ့ရှေ့ dont ။ အိမ်စာ, လေ့လာမှု, ပြဇာတ်က x box ကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ (သင်ပုံမရ)